आजबाट स्ट्यान्डर्डको एफपिओ, कहाँबाट दिने आवेदन ? - HAMRO YATRA
आजबाट स्ट्यान्डर्डको एफपिओ, कहाँबाट दिने आवेदन ?
काठमाडौं, चैत्र– स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकका फरदर पब्लिक अफरिङ्ग (एफपीओ) आजबाट निष्कासन हुने भएको छ । बहुराष्ट्रिय बैंक स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकले ३ अर्ब ३० करोड रुपैयाँको एफपीओ निष्कासन गर्न लागेको हो ।
बैंकले फेस भ्यालु मूल्यमा १ हजार १ सय ९० रुपैयाँमा प्रिमियम जोडेर १ हजार २ सय ९० रुपैयाँमा २५ लाख ५८ हजार १ सय ४० कित्ता एफपिओ निष्कासन गर्न लागेको हो । एफपीओ छिटोमा चैत ४ गते र आवश्यकता अनुसार चैत २५ गतेसम्म भर्न सकिनेछ । लगानीकर्ताले क्षमताअनुार न्युनतम १० देखि अधिकतम २५ हजार ५ सय ८० कित्तासम्मका लागि आवेदन दिन सक्ने छन् ।
एफपिओ निष्कासनपछि बैंकको शेयर संरचना ७० दशमलव २१ प्रतिशत सस्थापक र २९ दशमलव ७९ प्रतिशत सर्वसाधारणको हुनेछ । हाल ३ अर्ब ७४ करोड ९९ लाख रुपैयाँ चुक्ता पूँजी भएको बैंकले एफपिओ निष्कासनपछि चुक्ता पूँजी ४ अर्ब ५७ लाख रुपैयाँ पुग्नेछ । एफपिओ निष्कासन गर्न बैंकलाई इक्रा नेपालले ग्रेड टु प्लस रेटिङ प्रदान गरेको छ ।